गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले दिन्छ? : कांग्रेस नेता रमेशजंग - Himali Patrika
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गालाई यतिलेभन्दा ५० करोड बढी म तिर्छु, सरकारले दिन्छ? : कांग्रेस नेता रमेशजंग
हिमाली पत्रिका ५ माघ २०७६, 9:15 am
सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘प्रधानमन्त्रीको निवास हो बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन बालुवाटार, प्रधानमन्त्री सिंहदरबार आउन छोडिसक्नुभएको छ।
सिंहदरबारको आवश्यता परेन भने सिंहदरबारमा ताला लगाउने हो कि? प्रधानमन्त्री सुत्ने ठाउँमा मिटिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने, अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राख्ने हो?’ उनले भने।